ब्रेक्जिट: सहमतिरहित ‘नो-डील ब्रेक्जिट’ भनेको के हो Gorkha Samachar
ब्रेक्जिट: सहमतिरहित ‘नो-डील ब्रेक्जिट’ भनेको के हो
ब्रिटेन युरोपेली सङ्घबाट बाहिरिने प्रक्रिया अर्थात् ब्रेक्जिबारे लामो समयदेखि त्यहाँ जारी राजनीतिक बहसले पछिल्लो समय निकै चर्को रूप लिएको छ।
युरोपेली सङ्घसँग सहमति गरेर ब्रिटेन उक्त गठबन्धनबाट बाहिरिने कि कुनै सहमतिबिना सीधै बाहिरिने भन्ने विषयमा ब्रिटेनको पछिल्लो राजनीति ध्रुवीकृत देखिन्छ।
बिना कुनै सम्झौता अर्थात् अङ्ग्रेजीमा नो-डील ब्रेक्जिटको सम्भावनालाई वर्तमान प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले जोडदार रूपमा अघि बढाएका छन्।
उनकी पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री टरिजा मेले ईयूसँग ब्रेक्जिटका लागि हासिल गरेको सहमति उनको पार्टी र देशको संसद्‌बाट समेत पटकपटक अस्वीकृत भएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।
नो-डील ब्रेक्जिट भनेको के हो त ?
जनमत सङ्ग्रहको नतिजाअनुसार ब्रिटेनले युरोपेली सङ्घको सदस्यता परित्याग गरेर उक्त गठबन्धनबाट बाहिरिँदा ‘नो-डील’ को परिदृश्यमा ब्रिटेन र ईयू दुई पक्षबीच हालका सबै सम्बन्ध विच्छेद गरेर बहिर्गमनमा अघि बढ्ने र भावी सम्बन्धबारे कुनै पनि ठोस सहमति हुँदैन। ब्रिटेन तत्काल उक्त गठबन्धनबाट बाहिरिन्छ।
यूकेले ईयूको बजेटमा पनि आफ्नो योगदान दिनु पर्नेछैन- जुन हाल वार्षिक नौ अर्ब पाउन्ड जति रहेको छ।
त्यस्तो समय प्राप्त भएको भए हालको सम्बन्धको अवस्थालाई कायमै राख्‍दै नयाँ व्यापारिक सम्झौता गर्नका लागि दुवै पक्षलाई केही होलो हुने थियो।
यो कसरी अघि बढ्छ ?
टरिजा मेको प्रस्ताव असफल भएपछि ब्रेक्जिटको लागि समयसीमा ३१ अक्टोबरलाई तोकिएको थियो।
यो समयसीमासम्ममा बिनासहमतिको (नो-डील) ब्रेक्जिटलाई टार्नका लागि यूकेको सरकारले ब्रेक्जिटको योजनासम्बन्धी एउटा कानुन पारित गर्नुपर्छ, ईयूको तर्फबाट समय थप गरेर अर्को समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ वा ब्रेक्जिटलाई नै स्थगित गर्नुपर्छ।
थुप्रै राजनीतिज्ञहरू नो-डीलको विपक्षमा छन्।
तिनीहरू भन्छन् त्यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा क्षति पुग्न जानेछ र उत्तरी आइअरल्यान्ड र आइअरल्यान्ड गणतन्त्रकाबीच सीमानाका राख्‍नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जानेछ।
तर अन्य केही राजनीतिज्ञहरू नो-डीलको समर्थनमा छन्। उनीहरू भन्छन् – त्यस्तो ब्रेक्जिटपछि देखा पर्ने अप्ठ्याराहरूलाई छिटै हल गर्न सकिन्छ।